खेल्कुद Archives - नेपाली समाचार
खेल्कुद मनोरंजन रोचक समाचार समाचार
च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डो भर्सेस् नेइमार
Written by:AnonymousPosted on: December 12, 2017
युरोपियन च्याम्पयिन्स लिग फुटलब प्रतियोगिताको अन्तिम १६ को ड्र सार्वजनिक भएको छ । सोमबार सार्वजनिक ड्र अनुसार प्रायः ठूला टिमले ठूलै प्रतिस्पर्धी पाएका छन् । अहिले खास गरी स्पेनिस रियल मड्रिड, बार्सिलोना र फ्रेन्च क्बल पिएसजीमाथि धेरैको आँखा छ । राउन्ड १६ मा गत वर्षको च्याम्पियनसमेत रहेको रियल मड्रिडले कडा प्रतिस्पर्धी पाएको छ । यसै सिजन बार्सिलोना छाडेर पिएसजी गएका ब्राजिलियन स्टार नेइमार सम्मिलित टिमले स्पेनिस महारथि रियललाई कडा टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ ।…
"च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डो भर्सेस् नेइमार"
Written by:AnonymousPosted on: December 10, 2017
मंसिर २४, २०७४-श्रीलंकाले पहिलो वान डो आइतबार भारतलाई सजिलै सात विकेटले हराएको छ । टेस्ट सिरिज गुमाएयता वान डे सिरिजको पहिलो खेलमा श्रीलंकाले एकपक्षीय जित निकालेको हो । जितका लाग १ सय १३ रनको लक्ष्य पछयाइरहेको श्रीलंकाले २०.४ ओभरमा त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । उपुल थरंगाले त्यसमा ४९ रन बनाए । यससँगै तीन खेलको सिरिजमा श्रीलंकाले १–० को अग्रता लिएको छ । यसअघि फास्ट बलर सुरन्गा लकमलले चार विकेट लिएपछि भारत १ सय १२ रनमा…
"कोहली नखेल्दा भारतको हार !"
डब्लुसीएलसीमा नेपालको दुखद सुरुवात, पराजित अन्त्य
Written by:AnonymousPosted on: December 8, 2017
मंसिर २२, २०७४- आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । अघिल्ला चार खेलमा लगातार हार ब्यहोरेको नेपाल, यूएईविरुद्धको अन्तिम दुई खेलमा समेत पराजित हुन पुग्यो । हङकङसँगको पहिलो खेलमा ८३ रनको पराजय र दोस्रो खेल आँधीहुरीका कारण बराबरीमा सकिएपछि बिश्वकप छनोट खेल्ने नेपालको सम्भावना सकिएको थियो । ८ राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको सातौं स्थानमा रहँदै लिग सकेको नेपालले बिश्वकपको यात्रा तय गर्न अब घुमाउरो बाटो रोज्नु पर्नेछ । डिभिजन टू…
"डब्लुसीएलसीमा नेपालको दुखद सुरुवात, पराजित अन्त्य"
युएईसँगको खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा, काे-को परे? युएईसँगको खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा, काे-को परे?
Written by:AnonymousPosted on: December 7, 2017
काठमाडौं, मंसिर ११ विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) सँगको खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसिसी)का प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटा र कप्तान पारस खड्काको छनोट समितिले सोमबार १४ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो । नेपालले दोस्रो चरणमा छनोट भएका २० खेलाडीबाट युएईसँग खेल्ने ४ वैकल्पिकसहित १४ सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो । नेपाली टोलीमा भेट्रान स्पिनर शक्ति गौचनले टोलीमा…
"युएईसँगको खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा, काे-को परे? युएईसँगको खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा, काे-को परे?"
नेपाल युएईसँग ७ विकेटले पराजित
Written by:AnonymousPosted on: December 6, 2017
काठमाडौँ। विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल युएईसँग पराजित भएको छ। दुबईको अवुधावी खेल मैदानमा भएको खेलमा नेपाल युएईसँग ७ विकेटले पराजित भएको हो। २२२ रनको लक्ष्य पाएको युएईले ४५.५ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा २२१ रनको योगफल तयार पारेको थियो। युएईका विरुद्ध शरद भेषवाकरले ८१ रनको नटआउट पारी खेले। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल ५४ रनको अर्धशतकीय पारी खेले। कप्तान पारस…
"नेपाल युएईसँग ७ विकेटले पराजित"
खेल्कुद मनोरंजन रोचक समाचार
कसैले लगाउन नपाउने म्यारोडोनाको ‘रिटायर्ड’ १० नम्बर जर्सी मेस्सीले किन लगाउन पाए
एजेन्सी। हालै भारतका महान क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको जर्सी नं १० रिटायर गरियो । अब कसैले पनि यो जर्सी लगाउने छैनन् । भारतीय टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने खेलाडीको जर्सी नम्बर १० हुने छैन । हालै क्रिकेटर शार्दुल ठाकुरले १० नम्बर जर्सी लगाउँदा विवाद भएपछि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बिसिसिआइले १० नम्बर जर्सी रिटायर गरेको थियो । यस्ता खेलाडी अरु पनि छन् जसको जर्सी नम्बर रिटायर गरिएको छ । अस्ट्रेलियाका क्रिकेटर फिलिप ह्युजको २०१४ मा क्रिकेट खेल्दै गर्दा…
"कसैले लगाउन नपाउने म्यारोडोनाको ‘रिटायर्ड’ १० नम्बर जर्सी मेस्सीले किन लगाउन पाए"
मेस्सीलाई फोन गरेरै रोनाल्डोले भने, बालोन डी’ओर अवार्ड यो वर्ष मैले जित्छु
Written by:AnonymousPosted on: November 26, 2017
रियल मड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोले बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीलाई टेलिफोनै गरेर गरेको एक दाबीले अहिले खेल क्षेत्रमा चर्चा पाएको छ। रोनाल्डोले बालोन डी’ओर अवार्ड आफूले नै जित्ने दाबी गर्दै मेस्सीलाई फोन गरेको स्पेनिस सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितेका रोनाल्डोले बालोन डी’ओर पनि आफैले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन्। फ्रान्स फुटबल म्यागजिनले प्रदान गर्ने बालोन डी’ओर अवार्डका लागि रोनाल्डो, मेस्सी, नेइमारसहितका खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्। गएको वर्ष मेस्सीलाई पछि पार्दै…
"मेस्सीलाई फोन गरेरै रोनाल्डोले भने, बालोन डी’ओर अवार्ड यो वर्ष मैले जित्छु"
काठमाडौँ।आइसिसी महिला टि–ट्वेन्टी विश्वकप छनोट एसियाको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले चीनलाई ५० रनले पराजित गरेको छ । थाइल्याण्डमा भएको उक्त प्रतियोगितामा नेपालले जित हासिल गरे पनि ग्लोबल छनोटमा भने पर्न सकेन । युएइले मलेसियालाई पराजित गरेपछि नेपाल शीर्ष दुई स्थानमा पर्न नसक्दा छनोट हुन नसकेको हो । नेपालले शीर्ष दुईमा पुग्नका लागि चीनलाई हराउनुपर्ने बाध्यता थियो भने मलेसियाले युएइ र थाइल्याण्डले हङकङलाई पराजित गर्नुपर्ने थियो । तर युएइ विजयी भएपछि नेपाल शीर्ष दुईमा पर्न सकेन…
"नेपालद्वारा चीन पचास रनले पराजित"